Ingqungquthela: I-Web esebenzayo yokuCanda iThuluzi - i-Semalt Expert
I-Web scraping iyisisombululo esisebenzayo kubabhenki bewebhu kunye namashishini azama ukufumana ubuninzi beenkcukacha kwi-intanethi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo, ezifana ne-Facebook, Amazon, eBay ngokuzenzekelayo. I-Octoparse yiprogram yeprogram enkulu eyenza abasebenzisi bayo iiphakheji ezinkulu ukuqokelela idatha nokuyijika ibe yiifayile ezibonakalayo njenge-HTML, Excel, kunye ne-TXT. Ezi zilandelayo zikhetho ezintle ezinikezwa ngo-Okthoba:
Utshintshela ulwazi kwiMboniselo yeWebhu yeDynamic
I-Octoparse iyisithuluzi esilula ukuyisebenzisa esinceda abasebenzisi ukuba bakhiphe okuqukethwe kwiwebhusayithi. Isebenza ngamaphepha ewebhu anamandla, kuquka ukukhangela idatha kunye nobuhedeni. Ngaphezu koko, inkonzo yayo yefu ingafumana kwaye igcine ixabiso elikhulu leenkcukacha.
Ukuqokelela Iinkcukacha ezifihlakeleyo kwiWebhusayithi
Kwiimeko ezininzi ukukhangela i-web bafuna ukufumana iinkcukacha ezithile kumaphepha ewebhu, kodwa abanakufumana ulwazi olufunekayo, kuba ye-website eyinkimbinkimbi okanye nayiphi na isizathu. Ingqungquthela iyakwazi ukufumana nokukhipha yonke into efihliweyo.
Ufumana isiqulatho nge-Infinite Scrolling
Ukukhangela idatha ngokuphequlula okungapheliyo kunokuba ngumsebenzi onzima. Abaphandi bewebhu bafuna ukupheqela phantsi ukuya ngasezantsi kwephepha ngalinye lewebhu ezivakatyelayo ukulayisha umxholo obhaliweyo okanye imifanekiso. Iziqulatho ziya kulayishwa ngokuqhubekayo njengoko zigoqa ukuya ezantsi kwephepha.
I-Octoparse inokunceda abasebenzisi ukuba bakhuphe zonke ii-hyperlinks eziposwe kwiwebhusayithi ethile. Enyanisweni, kunika abasebenzisi ngendlela elula yokuzenzekelayo ama-IPs amakhulu, kwaye ngexesha elifanayo, linikeza inketho yezinto eziphambili, njenge-Ajax Timeout, kwisixhobo se XPath, njl. Kwakhona, i-Octoparse inokukhangela idatha yabasesha bewebhu kunye nezicelo ezithile kwaye ibuyise ngempumelelo idatha ehleliweyo.
Kubasebenzisi, kungcono ukwahlula imisebenzi yabo, xa i-intanethi iyanqumla. Esikhundleni sokufumana idatha yabo kwasekuqaleni, bangahlula umsebenzi othile kwiiprojekthi ezimbini.
Ngo-Octoperse, abasebenzisi bewebhu banokwenza izinto ezininzi, njengokuvula iphepha elithile lewebhu, ukungena kwi-akhawunti, ukukhuphela imifanekiso, ukufaka umbhalo kunye nezinye ezininzi. I-Octoparse inikezela nabasebenzisi bayo ngemodi ephakamileyo ukuba bancede bajongane nolwazi olunzima. Ngokomzekelo, ukusebenzisa le mode, abasebenzisi kufuneka badonse baze bayeke iibhloko ngaphakathi kwendlela yokusebenza yoyilo ukulungiselela imisebenzi eyahlukeneyo. Imodi ye-smart inikezela abasebenzisi ithuba lokuguqula nayiphi na iphepha lewebhu ngokuzenzekelayo kwi-Excel ngokucinezela iqhosha elilodwa. Enyanisweni, le modeli isebenza ngokugqwesileyo kwitheyibhile yamaphepha eluhlu, njengemiphumo yosesho okanye iphepha lomgangatho Source .